🏮ChinaTown 125 Cafe’🏮 – YANGON STYLE
🏮ChinaTown 125 Cafe’🏮
ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးချင်တဲ့နေရာလေးကတော့ 19လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာရှိတဲ့ 125cafe’ လေးပါ
တရုတ်အငွေ့အသက်တွေနဲ့မို့ တရုတ်ပြည်ကိုရောက်သွားသလို ခံစားရစေမှာပါ အပေါ်ထပ်ကတော့အထဲကတက်လို့မရဘဲ အပြင်ကတက်ရတာပါ…😍
ဆိုင်ကနှစ်ထပ်ရှိပြီး အပေါ်အောက်နှစ်ထပ်ရှိလို့ ကျဉ်းပေမဲ့ သူ့စတိုင်နဲ့သူမို့ နေရာအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး တရုတ် Themed နဲ့ Decoration နဲ့မို့ မသိရင် တရုတ်ပြည်ကို ရောက်နေသလိုပါပဲ ခွက်လေးတွေကိုလည်း Traditional ခွက်လေးတွေ သုံးထားတာ တွေ့ရတယ်
အစားအသောက်တွေတော်တော်များများလည်းရတယ်ဗျ ရှန်ဟိုင်းပေါက်စီ စားဖြစ်ခဲ့တယ် စာ‌နေကြပေါက်စီတွေနဲ့မတူပါဘူး sauce‌ လေးနဲ့မို့ တော်တော်စားကောင်းတယ်
ခေါက်ဆွဲကြော်ပင်လယ်စာ စားခဲ့တယ် စားမှကြော်ပေးတာပါ ကောင်းပါတယ် နည်းနည်းတော့ငံတယ် onion နဲ့မှ ကွက်တိ 🍡🍡ကြက်သားလုံးကလည်း ချဉ်ရည်က အသက်ပဲ တခြားအ‌စားအသောက်တော်တော်များများရသေးတယ် အားလုံးက ဈေးနဲ့ယှဉ်ရင် မဆိုးဘူးဗျ ….၃မျိုးမှ 9000လောက်ပဲ ကျခဲ့တယ်
🏮ကော်ဖီမျိုးစုံလည်းရတယ် အအေး Cocktail နဲ့ Smoothies နဲ့ house wine တော်တော်စုံစုံရပါတယ် Shanghai Mule နဲ့ Rice Wine 9% သောက်ကြည့်ခဲ့တယ် Shanghai Mule က နည်းနည်းပျင်းပါတယ် တရုတ်ဆန်ဝိုင်လေးကတော့ ပျော့လို့ မိန်းကလေးတွေရော သောက်လို့ရတာပဲဗျ
Fried Noodles Seafood🍝🍤🍛
Rice Wine လေးကလည်း တရုတ်ရိုးရာဗူးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုး
အပေါ်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ view လေး
🏮3000၀န်းကျင်‌‌နဲ့ တရုတ်တန်းမှာ ဒီလိုအနားယူရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတာပဲ ပုံမိုက်မိုက်လေးတွေလည်း ရိုက်လို့ရတယ် ..ဓာတ်ဖမ်းရတာ ဝါသနာပါသူတွေ မဖြစ်မနေသွားသင့်တဲ့နေရာလေး…serviceကောင်းတယ် service tax ရော Gov taxရော မပေးရတာပဲ…. china night modeလေးနဲ့ Chill ချင်သူများအတွက်….
Address : No 125, 19th Street, upper block, Latha Township, Yangon.